Somaliya oo cadeysay sababta dalka looga eryay Safiirkii Kenya – AfmoNews
Somaliya oo cadeysay sababta dalka looga eryay Safiirkii Kenya
Xoghayaha Joogtada ah ee Wasaaradda Arrimaha Dibadda Somaliya, Maxamed Cali Nuur ayaa sheegay in Somaliya ay dib ugu yeeratay Safiirkeeda Kenya, Danjire Maxamuud Axmed Nuur Tarsan.
Xoghayaha oo la hadlay Warbaahinta Qaranka ayaa sidoo kale sheegay in Safiirka Kenya, Amb. Lucas Tumbo lagu wargaliyay in uu dalkiisa wadatashi ugu laabto.
Xoghayaha ayaa sheegay in Somaliya ay go’aankan qaadatay, iyadoo ilaalineysa madaxbannaanideeda, ka dib markii ay Kenya ku eedeysay inay si bareer ah u faragelineyso arrimaha gudaha ee dalka, gaar ahaan Jubbaland.
Villa Somalia ayaa Kenya ku eedeysay in ay Madaxweynaha Jubbaland, Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) ku cadaadineyso inuu fuliyo ajandaheeda siyaasadeed, taasoo liddi ku ah heshiiskii siyaasadeed ee doorashooyinka dalka, isla-markaana ka hor imaaneysa hab dhaqanka diblomaasiyadeed ee dowladaha deriska ah.
Ra’iisal Wasaare Kuxigeenka Dalka, Mahdi Maxamed Guuleed (Khadar) ayaa dhawaan waxa uu Madaxweyne Kuxigeenka Kenya, William Ruto uu ku eedeeyay inuu yiri ‘Waxaan bedeli doonnaa Madaxda Dowladda Federaalka’ ee haatan talada dalka haya.
Xiriirka labada dal ayaa u muuqdo mid markale sii xumaanaya, xilli toddobaadyadii ugu dambeysay uu u muuqday mid ka soo reynaya, ka dib markii Somaliya ay si heer sare ah u hawlgelisay Safaaradeeda Magaalada Nairobi.